ग्यास चुलो, २०२१ मा कुन रोज्ने? हामी तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्छौं
को ग्यास चुल्हो तिनीहरूले उच्च प्रदर्शन प्रस्ताव गर्दछ जब यो हाम्रो जेबलाई असर नगरी हाम्रो घर वा कोठा तताउने कुरा आउँछ, जसले ठूलो आर्थिक बचतलाई अनुमति दिन्छ।
Para तपाईंलाई उत्तम ग्याँस चुल्हो छान्न मद्दत गर्नुहोस्तल तपाईले आज किन्न सक्ने उत्तम मोडेलहरूसँग अद्यावधिक गरिएको तुलना पाउनुहुनेछ। हामी तपाईंलाई जानकारीको ठूलो मात्रा पनि प्रदान गर्दछौं जसमा हामी यी स्टोभहरू कसरी काम गर्छन्, तिनीहरूलाई कहाँ राख्ने, तिनीहरूका फाइदाहरू, बेफाइदाहरू ...
ग्याँस चुल्हो को तुलना
सुरु गर्न, यहाँ एक छ सबै भन्दा राम्रो ग्यास चुल्हो संग तुलना जुन तपाईं आज किन्न सक्नुहुन्छ:
घर यूके ग्याँस चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
बुटेन ग्यास चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०44। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
Campingaz 3000002601... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०81। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
बाहिरी ग्यास चुलो... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
HJM GA4200 ग्यास स्टोभ, ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
प्रोमेथियस ब्ल्याक 11K -... सुविधाहरू हेर्नुहोस् कुनै पूनरावलोकनहरू छैनन् सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	घर यूके ग्याँस चुलो...
मूल्य गुणस्तर	बुटेन ग्यास चुलो...
हाम्रो मनपर्ने	Campingaz 3000002601...
बाहिरी ग्यास चुलो...
HJM GA4200 ग्यास स्टोभ, ...
प्रोमेथियस ब्ल्याक 11K -...
सबै भन्दा राम्रो ग्यास चुल्हो
DeLonghi संसारभरि सबैभन्दा प्रसिद्ध स्टोभ निर्माताहरू मध्ये एक हो र यसले आफ्नो सूचीमा केही सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेलहरू भएकोमा गर्व गर्न सक्छ, जस्तै यो DeLonghi VBF वा VBF2 जसलाई दुई उत्कृष्ट नीलो फ्लेम ग्यास चुलो मानिन्छ।
De'Longhi VBF2 हीटर ...
दुबै मोडेलको मूल्य धेरै कम छ, यद्यपि VBF को मामला मा यो एक ठूलो हानि छ, र त्यो यो थर्मोस्टेट छैन, त्यसैले हामी ज्वाला को आकार नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेछैनौं। यसको मतलब यो हुनेछ कि हामीले उपभोगमा बचत गर्न सक्दैनौं, यद्यपि यदि हामीले यो खोजिरहेका छौं भने, हामी थर्मोस्टेट समावेश गर्ने VBF2 मोडेलको लागि रोज्न सक्छौं।
दुबै मोडेलहरू बीचको मूल्य भिन्नता न्यून छ, त्यसैले हामी तपाईंलाई सीधै किन्न सिफारिस गर्छौं VBF2 मोडेल किनभने यो नयाँ र थप पूर्ण छ।
प्रोमेथियस कालो स्टोभ
बजारमा सबैभन्दा शक्तिशाली नीलो फ्लेम स्टोभहरू मध्ये अर्को हो प्रोमोनेट जसले बेलनाकार चुलोको नक्कल गर्छ। हामीले कुरा गरेका अन्य स्टोभ जस्तै, यसमा3पावर पोजिसनहरू छन् जुन यसलाई सबै समयमा हाम्रो आवश्यकताहरू अनुसार अनुकूलन गर्न सक्षम छन्। निस्सन्देह, यसमा थोरै कम पावर छ, 11000 W, जुन कुनै पनि कोठा, सबैभन्दा ठूलो वा बाहिरी ठाउँहरूमा पनि तताउन पर्याप्त हुनेछ।
बजारमा यसको हालको मूल्य धेरै प्रतिस्पर्धी छ शक्तिशाली हुनुका साथै यो फ्लेम इफेक्टको साथमा, यसमा अन्य रोचक विकल्पहरू छन् जस्तै ट्रिपल सेक्युरिटी सिस्टम वा ट्राफिक ह्यान्डलहरू सजिलै सार्नको लागि यसको घुम्ने पाङ्ग्राहरूको लागि धन्यवाद। प्रोपेन र ब्यूटेन ग्याँस स्वीकार गर्दछ।
हामीले बजारमा भेट्टाउन सक्ने उत्कृष्ट उत्प्रेरक स्टोभहरू मध्ये एक ओलिम्पिया स्प्लेन्डिड हो, एउटा चुलो जसमा उत्प्रेरक प्यानलले हामीलाई 4.200W को अधिकतम शक्ति प्रदान गर्दछ। अवश्य पनि, र यो कसरी हुन सक्छ, हामी यस शक्तिलाई तीनवटा चयन स्तरहरू समावेश गर्नका लागि धन्यवाद विनियमित गर्न सक्छौं: 1200, 2800 र 4200।
यो इटालीमा बनेको चुलो पनि हो, धेरै कम खपत भएको, साना कोठाहरू तताउनको लागि आदर्श, र यसको न्यूनतम ग्यास खपत 118 ग्राम/घण्टा छ, जबकि अधिकतम 305 ग्राम/घण्टा मात्र हो।
यदि हामी अलि बढी पावर खोजिरहेका छौं भने, Orbegozo HBF 90 हामीलाई 4200 W सम्म र 305 ग्राम / घण्टाको अधिकतम खपत प्रदान गर्दछ।, जुन हामीले ब्युटेन स्टोभ र यस ग्यासको मूल्यको सामना गरिरहेका छौं भनेर विचार गर्दा धेरै उच्च छैन।
Orbegozo HBF 90 काठ स्टोभ ...
यस स्टोभको सामान्य मूल्य 101 यूरो हो, यद्यपि धेरै सामान्य रूपमा हामी यसलाई कम मूल्यमा फेला पार्न सक्छौं जुन सामान्यतया लगभग 80 वा 90 यूरो हुन्छ.
कम्प्याक्ट डिजाइनको साथ, यो Butsir EBBC0016 स्टोभले हामीलाई ब्युटेन ग्यासको साथ कुनै पनि कोठा तताउने सम्भावना प्रदान गर्दछ। यसको मूल्य पनि यो सबैभन्दा किफायती छ यो तुलना र यो हो कि हामी यसलाई धेरै थोरै पैसामा प्राप्त गर्न सक्छौं।
यसको मुख्य विशेषताहरु मध्ये हामी यसलाई हाइलाइट गर्छौं दुई शक्ति स्तर, 98g / h को खपत संग एकल बर्नर प्रयोग गर्न सक्षम हुनु वा दोस्रो बर्नर संग शक्ति बढाउन को लागी कुल 200g / h को खपत प्रदान गर्दछ।
ग्याँस चुल्हो को प्रकार
निलो ज्वाला ग्यास चुलो
निलो ज्वाला ग्यास चुल्हो, तिनीहरूले कन्भेन्सनद्वारा कोठालाई तताउँछन् वा उस्तै, जेनेरेट गरिएको तातो हावा हो जसले सबै हावाको तापक्रम बढाउन चिसो हावा सार्छ।। यी प्रकारका स्टोभहरू साना कोठाहरू, 15 वर्ग मिटर भन्दा कम, 40 वर्ग मिटरको कोठाहरूमा पनि प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी बन्नका लागि धेरै सल्लाह दिइँदैन।
धेरै समय अघिसम्म, यी प्रकारका ग्यास चुल्होहरू किफायती थिएनन् किनभने तिनीहरूले ठूलो मात्रामा ग्यास खपत गर्थे। आजको ब्लू फ्लेम ग्यास चुल्हो तिनीहरूले ग्यास धेरै राम्रो प्रयोग गर्छन्, परिणाम धेरै प्रभावकारी हुन्छ र सबै भन्दा माथि आर्थिक। तपाईलाई एउटा विचार दिनको लागि, खपत सामान्यतया4लिटर प्रति ग्यास प्रति घण्टा भन्दा माथि हुँदैन, जसले हामीलाई 4000W सम्मको ताप ऊर्जामा पुग्न अनुमति दिन्छ।
उत्प्रेरक स्टोभहरू साना बच्चाहरू वा जनावरहरू भएका घरहरूका लागि ठूलो संख्यामा विशेषज्ञहरूले सिफारिस गर्छन्। तिनीहरूले प्रदान गर्ने ठूलो सुरक्षा। र यो तिनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्ने मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि यसले यसको उत्प्रेरक प्यानल मार्फत तातो उत्सर्जन गर्दछ जसले यसलाई प्रत्यक्ष आगोसँग काम गर्दैन, घरका कान्छा मानिसहरू र ती सबै जिज्ञासु जनावरहरूको लागि ठूलो संख्यामा खतराहरू बेवास्ता गर्दछ। स्टोभ नजिक जाने प्रवृत्ति।
यसको पावर 2.500 र 3.100 W को बीचमा छ, प्रति घण्टा 140 र 200 ग्राम बीचको अनुमानित खपतको साथ।। यसले यसको खपत निलो फ्लेम ग्यास चुल्होको भन्दा कम बनाउँछ। हामीले स्टोभ बन्द गरेपछि तिनीहरूले तापक्रमलाई धेरै राम्रोसँग समात्छन्।
अन्तमा, तिनीहरूको ठूलो बेफाइदा यो हो कि तिनीहरू अन्य प्रकारका स्टोभहरू जत्तिकै चाँडो तताउँदैनन्, तर निस्सन्देह तिनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्ने फाइदाहरूले यो बेफाइदालाई पृष्ठभूमिमा राख्छ।
उज्ज्वल ग्यास चुल्हो
ग्यास चुल्तीहरू घरहरूमा व्यापक रूपमा चिसो दिनमा ताप प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू सधैं सम्भावित आगो र ग्यास चुहावटबाट बढी खतरनाक मानिन्छन्। यद्यपि, धेरै बर्षहरूमा, तिनीहरूले यसको सुरक्षा र दक्षता वृद्धि गरेका छन्।
जब तपाईको घरमा कुन प्रकारको ग्याँस स्टोभ राख्न चाहानुहुन्छ भन्ने कुराको कुरा आउँदा तपाई कुनचाहिँ उत्तम हो भन्नेमा अचम्म मान्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले जहाँ कोठा राख्नु भएको छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। यसमा राम्रो वेंटिलेसन हुनुपर्दछ, चूलोले वातावरणबाट अक्सिजन खान्छ।
निम्न रूपमा रेडियन्ट ग्यास चुल्होले कार्य गर्दछ। तिनीहरूसँग उच्च प्रदर्शन इन्फ्रारेड बर्नर छ जसले तिनीहरूलाई उच्च शक्ति बनाउँदछ। तिनीहरू 4.000 W सम्म पुग्न सक्षम छन्, त्यसोभए तिनीहरू २ rooms र square 25 वर्ग मिटर बिच ठूला कोठाहरू तताउन सक्छन्। किनभने तिनीहरू अधिक शक्तिशाली छन्, तिनीहरूलाई राम्रो हावा हालेको कोठामा राख्नु पर्छ। तिनीहरू प्राय: उपभोग गर्दछन् प्रति घण्टा gas०० ग्राम ग्यास। ध्यानमा राख्दै कि बुटेन ग्यास सिलिन्डरमा १२..12,5 किलोग्राम छ र त्यहाँ सबैभन्दा सस्तो छ, यो महँगो छैन। यसलाई बच्चाहरूबाट टाढा राख्न सल्लाह दिइन्छ।
उज्ज्वल ग्यास चुल्हो प्रायः अरूसँग संभ्रमित हुन्छ जस्तै उत्प्रेरक र निलो ज्वाला। यद्यपि यसको अपरेशन उस्तै छैन। उत्प्रेरक स्टोभले एक उत्प्रेरक प्यानल प्रयोग गर्दछ जसले सीधै आगो प्रयोग गर्दैन। यदि तपाईं घरमा बच्चाहरू छन् भने यी स्टोवहरू सिफारिश गरिन्छ।
अर्कोतर्फ, निलो लौ संवहन द्वारा काम गर्दछ। ग्यास एक उच्च तापक्रममा जलाउँछ, जो एक कम इन्धन खपत र उच्च ताप उत्सर्जन छ। अन्य ग्याँस चूवाहरू भन्दा उनीहरूसँग लामो उपयोगी जीवन छ
यस जानकारीको साथ, तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि स्टोभका प्रकारहरू बिचमा धेरै अलमल्लमा पर्नुहुन्न।
ग्यास चुलो कहाँ राख्ने
ग्यास चुलो किन्ने सबैले सोध्ने सबैभन्दा सामान्य प्रश्नहरू मध्ये एउटा यसको स्थानसँग सम्बन्धित छ। र यो हो कि हामी मध्ये धेरैले ग्याससँग सम्बन्धित सबै कुरालाई खतरनाक रूपमा वर्गीकृत गरेका छौं, जब हामीसँग केही सावधानीहरू छन् भने, यो खतरनाक हुनबाट टाढा छ।
ग्यास चुलो राख्न तपाईंले निम्न संकेतहरू पालना गर्नुपर्छ;
तिनीहरूलाई राम्ररी हावा चल्ने कोठाहरूमा राख्नुहोस् र ए 20 वर्ग मीटर भन्दा ठूलो आकार
शयनकक्ष, साना ठाउँहरू वा खराब हावायुक्त कोठाहरूमा यसको स्थापना सिफारिस गरिएको छैन।
यद्यपि तपाईले ग्यास चुलो राख्दा सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ, तपाईले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन किनकि वातावरणले निश्चित CO2 लोडमा पुग्दा धेरैजसो स्वचालित बन्द प्रणाली हुन्छ। यसले प्रमुख समस्याहरूलाई जोगाउँछ र हामीलाई सधैं कुनै पनि खतराबाट जोगाउँछ।
कसरी एक ग्यास चूल्का गर्न
धेरै व्यक्तिहरूलाई ग्याँस स्टोभलाई कसरी प्रकाश पार्ने भनेर श have्का हुन्छन् खतराहरूबाट बच्नको लागि। गन सिलिन्डर प्रेशर नियामक भल्भलाई खोल्नको लागि पहिलो कुरा हो। नियामक घुंडीलाई थिच्नु पर्छ लगभग २० सेकेन्ड र यसको अधिकतम स्थितिमा घुमाइएको। जब हामी नियन्त्रणमा राख्छौं, हामी पाईजोइलेक्ट्रिक बटनमा धेरै चोटि थिच्दछौं पायलट फ्लेमलाई प्रकाश बनाउनका लागि। जब ज्वाला प्रज्ज्वलित हुन्छ, केही थप सेकेन्डको लागि घुँडालाई समात्नु उत्तम हुन्छ र त्यसपछि अलि अलि छोड्नुहोस्।
यदि पायलट ज्वाला प्रज्ज्वलित गरेपछि र नियामक घुँडा छोड्दा यो बाहिर जान्छ, यो किनभने बोतल समाप्त भएको छ। यदि, अर्कोतर्फ, ज्वाला प्रज्वलित हुँदैन, पाइजोइलेक्ट्रिक बटन भाँच्न सक्छ वा धूलो स collected्कलन गरेको हुन सक्छ।
एक पटक गयो स्टोभलाई चालु नगर्न यो महत्वपूर्ण छ, यदि तपाईंले यसलाई चलाउनु पर्छ भने, यसलाई बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ र स्थिर हुन केही मिनेट कुर्नुहोस् बोतलमा ग्यासको लागि। यो सम्भावित ग्यास विस्फोटबाट बच्नको लागि गरिन्छ।
के ग्यास चुल्तीहरू सुरक्षित छन्?
यी सबै तताउने उपकरणहरू जस्तै, ग्याँस चूलोहरूमा उनीहरूको जोखिम हुन्छ। ती खतरनाक हुन सक्छन् यदि राम्रोसँग र सावधानी अपनाईएन भने। खतरनाक अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले:
ग्यास चुल्हो प्रयोग नगर्नुहोस् बाथरूम वा बेडरूममा.
उनीहरूलाई धेरै सानो (लगभग 3,5. square वर्ग मीटर) कोठामा जडान नगर्नुहोस्, किनकि वातावरणीय हावा खान्दा हामी आफैंलाई घाउको जोखिममा पार्छौं।
यदि बिजुली 4650 XNUMXW० W भन्दा बढि छ भने कोठा सबै समयमा हुनु पर्छ एक हावा संचलन।
यदि तपाईं सुत्न जानुहुन्छ भने ती बन्द गर्न सल्लाह दिइन्छ.
बेसमेन्टमा रिजर्भ सिलिन्डरहरू नराख्नुहोस्।
स्टोभ र सम्भव ज्वलनशील वस्तुहरू जस्तै फर्निचर र आर्मचेयरहरू बीच एक सुरक्षित दूरी छोड्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यसलाई कभर नगर्नुहोस् कुनै परिस्थितिमा लुगाको साथ।
यदि हावा एकदमै बासी भयो भने, हावा नवीकरण गर्न १० मिनेट विन्डोज खोल्नुहोस्।
धुलो तपाईंको सबैभन्दा खराब शत्रु हो। गर्मी को समयमा, तिनीहरूलाई कभर गर्न राम्रो छ तिनीहरूलाई धूल स collecting्कलन गर्नबाट रोक्नको लागि, किनकि यसले खतरा र उनीहरूको प्रदर्शनमा कमी ल्याउन सक्छ।
तपाईंको सुरक्षा बढाउनको लागि, बर्षहरूमा ग्यास चुल्होहरूले उनीहरूको कार्यक्षमता सुरक्षा प्रणालीसँग सुधार गरेका छन जुन यस प्रकार काम गर्दछ:
उनीहरूसँग एउटा प्रणाली छ कि घटनामा गैसलाई काट्नुहोस् जब आगो निस्कन्छ। यस तरिकाले हामी सम्भावित ग्यास विषाक्तताबाट जोगिने छौं।
यदि वातावरण भारी प्रदूषित छ, ग्यास उत्सर्जन स्वतः काटिन्छ। यदि वातावरण अक्सिजनमा कम छ वा बर्नर गन्दा छ, कार्बन मोनोअक्साइड दहनको दौरान उत्पन्न हुनेछ। यो एक विषालु ग्याँस हो, त्यसैले स्टोभले यस अवस्थाबाट बच्नेछ।
यदि सुरक्षा प्रणालीले काम गर्दैन भने, चुलो पनि काम गर्दैन। त्यसैले, तिनीहरू एकदम सुरक्षित छन्।
ग्यास चुलोका फाइदाहरू
ग्यास चुल्होको मुख्य फाइदाहरू मध्ये हामी फेला पार्न सक्छौं;
पावर आउटेजहरू। ग्यास चुल्होले ग्यासको नामले जस्तै काम गर्छ त्यसैले हामीले बिजुलीको खर्चमा पर्नु पर्दैन। क्षेत्रहरूमा जहाँ आपूर्ति कटौती सामान्यतया सामान्य छ, तिनीहरू एक रोचक स्रोत हुन्।
छिटो इग्निशन र सानो सफाई। यस प्रकारको स्टोभ चाँडै र सजिलैसँग प्रज्वलित हुन्छ, र ठूलो मर्मत वा गहिरो सफाई आवश्यक पर्दैन।
तापमान नियमन। अन्य प्रकारका चुलोहरू जस्तो नभई, ग्यास चुल्होहरूले हामीलाई तापक्रमलाई धेरै नियन्त्रणमा राख्न र यसलाई हाम्रो मनपर्ने रूपमा विनियमित गर्न अनुमति दिन्छ, हामीलाई सधैं आवश्यक पर्ने तापमा निर्भर गर्दछ।
ग्यास चुल्हो को हानि
ग्यास चुल्हो को मुख्य हानि निम्नानुसार छन्;
पोर्टेबिलिटी। ग्यास चुल्हो सामान्यतया आकारमा सानो हुँदैन त्यसैले तिनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सामान्यतया धेरै जटिल हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको स्टोभलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निरन्तर वा धेरै पटक सार्न आवश्यक छ भने, तपाइँले अर्को प्रकारको चुलो खोज्न आवश्यक पर्दछ।
ग्यास चुहावट। हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, ग्यास चुल्होको मुख्य कमजोरी मध्ये एक भनेको ग्यास चुहावट हो जसले ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक भन्दा बढी समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस समस्याबाट बच्नका लागि बारम्बार स्टोभ जाँच गर्न आवश्यक छ।
हाल ब्युटेन सिलिन्डरको मूल्य १४.१५ युरो छ, मेमोरीमा सबैभन्दा कम मूल्यहरू मध्ये एक, तर जुन जुलाई 2016 देखि बढ्दै गइरहेको छ कुनै ब्रेक नभएको जस्तो देखिन्छ।
तल तपाईले यस ग्राफमा ब्युटेन सिलिन्डरले हालैका महिनाहरूमा भएको विकास देख्न सक्नुहुन्छ;
के ग्यास वा केरोसिन स्टोभ राम्रो छ?
को मट्टीतेल चुलो परिस्थितिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ धेरै छिटो क्यालोरी इनपुट ठूला कोठा र कोरिडोरहरूमा जस्तै। सार्वजनिक भवनहरू जस्ता क्षेत्रहरू, जहाँ हावाको धाराहरू लगातार ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने माध्यमबाट प्रवेश गर्दछ। यसले गर्दा प्रत्येक पटक हावा नवीकरण हुन्छ, यो फेरि चिसोमा प्रवेश गर्छ।
यी प्रकारका परिस्थितिहरूको लागि, केरोसिन स्टोभ आदर्श हो, किनकि छोटो समयमा ताप प्रदान गर्दछ। यो बेसमेन्टहरू, कार्यशालाहरू, mezzanines र घरेलु उपयोगको लागि बेसमेंटहरू जस्ता स्थानहरूका लागि पनि राम्रो छ।
यसको मुख्य फाइदा यो हो यो विस्फोट वा आगो को कुनै जोखिम छैन। थप रूपमा, तिनीहरू पोर्टेबल हुन्, स्थापना वा मर्मतको आवश्यकता पर्दैन, सस्तो र मौन छन्। केरोसिन वा प्याराफिन पेट्रोलियम डिस्टिलेटबाट प्राप्त ईन्धन हो र एकदम सस्तो छ। यद्यपि, तिनीहरूले एक गन्ध दिन्छ जुन विषाक्त हुन सक्छ जब स्विच र अफ हुँदा। उनीहरूले वातावरणलाई पनि धेरै लोड गर्दछन्, त्यसैले छोटो समयमा यसलाई भेन्टिलेसन आवाश्यक हुन्छ र चिसो फेरि प्रवेश हुन्छ।
यस प्रकारको स्टोभहरू भन्दा फरक, ग्याँस चूल्हेहरू तिनीहरूले वातावरण यति लोड छैन र तिनीहरू समयसँगै स्थिर हुन्छन्। त्यसोभए, निष्कर्षमा, यदि तपाईंलाई खुला र बन्द ढोकाबाट निरन्तर वेंटिलेसन रहेको स्थानहरूमा अधिक ताप चाहिन्छ भने उत्तम विकल्प केरोसिन हो। यसको विपरित, यदि तपाइँलाई स्थिर र बन्द स्थानमा तातो आवश्यक छ भने, राम्रो ग्यासले।
यस जानकारीको साथ तपाईसँग ग्यास चूल्का र उनीहरूको सञ्चालनको बारेमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ।
1 ग्याँस चुल्हो को तुलना
2 सबै भन्दा राम्रो ग्यास चुल्हो
2.2 प्रोमेथियस कालो स्टोभ
2.3 ओलम्पिया शानदार
3 ग्याँस चुल्हो को प्रकार
3.1 निलो ज्वाला ग्यास चुलो
3.2 उत्प्रेरक स्टोभ
3.3 उज्ज्वल ग्यास चुल्हो
4 ग्यास चुलो कहाँ राख्ने
5 कसरी एक ग्यास चूल्का गर्न
6 के ग्यास चुल्तीहरू सुरक्षित छन्?
7 ग्यास चुलोका फाइदाहरू
8 ग्यास चुल्हो को हानि
9 ब्यूटेन मूल्य
10 के ग्यास वा केरोसिन स्टोभ राम्रो छ?
स्टोभ » ग्यास चुल्हो